Doodii baarlamaanka | Somaliska
Maanta waxaa dood kulul ka dhacday baarlamaanka Sweden iyadoo lagu soo bandhigay [caption id="attachment_2312" align="alignright" width="365" caption=" Christina Höj Larsen "] [/caption] aragtiyo badan oo ku saabsan arimaha socdaalka iyo soo galootiga. Dooda waxaa ka halay mudanayaal dhowr ah oo ka kala socda xisbiyada kala duwan ee dalka. Ugu horeyntii waxaa dooda furay Fredrik Lundh Sammeli oo ka tirsan xisbiga SocialDemokraterna isagoo ku baaqay in la mideeyo familada. Waxa uu soo qaatay mudaharaadkii ay soomaalidu ka dhigeen irada hore ee baarlamaanka inta aysan bilaaban dooda. Waxa uu dalbaday in la badalo sharciga isagoo soo qaatay magacyada hooyooyin Soomaaliyeed oo caruurtooda maqantahay. Ka dib waxaa la wareegay mikrofoonka Maria Ferm oo ka tirsan xisbiga Deegaanka iyadoo ka [caption id="attachment_2313" align="alignright" width="372" caption="Fredrik Lundh Sammeli "] [/caption] hadashay baasaboor la'aanta Soomaalida iyo in DNA wax lagu cadeyn karo. Waxay sheegtay in dowlada ay kala shaqeynayaan xal u helida arintaas. Ka dib waxaa halkaas ka hadlay Christina Höj Larsen oo ka tirsan xisbiga Vänsterpartiet iyadoo si qiiro leh uga hadashay arimaha Soomaalida oo tusaale u soo qaadatay hooyo lagu magacaabo Faduma oo degan Falköping. Christina ayaa cambaareysay aamusnaanta laga aamusanyahay arintaan. Waxay sheegtay in caruurta laga ganacsado ay siyaadineyso marka waalidiinta loo diido caruurtooda. Waxay sheegtay in heshiiskii dhexmaray dowlada iyo xisbiga Deegaanka uu yahay qalad qalad ku sax. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Fredrick Federley oo ka tirsan xisbiga Centerpartiet isagoo sidoo kale hadlay mideynta reeraha iyo in uu la kulmay Soomaali dhibaato ka haysato arintaan. Sidoo kale waxaa ka hadashay goobta Emma Henriksson oo ka tirsan xisbiga KristDemokraterna iyadoo ka hadashay shuruuda aqoonsiga. Waxaa goobta ka dhacay doodo dhexmaray xubin ka tirsan xisbiga cunsuriga ah ee SD iyo mudanayaasha aan kor ku soo xusnay. Si kastaba ha ahaatee arinta Soomaalida ayaa la dhihi karaa in ay maanta ahayd ajandaha ugu weyn ee dooda ku saabsan arimaha Socdaalka iyo Soo galootiga. Dib ayaan ka soo qori doonaa wixii go,aano ah ee laga gaaray baarlamaanka iyo faahfaahintooda.
Maanta waxaa dood kulul ka dhacday baarlamaanka Sweden iyadoo lagu soo bandhigay
aragtiyo badan oo ku saabsan arimaha socdaalka iyo soo galootiga. Dooda waxaa ka halay mudanayaal dhowr ah oo ka kala socda xisbiyada kala duwan ee dalka.
Ugu horeyntii waxaa dooda furay Fredrik Lundh Sammeli oo ka tirsan xisbiga SocialDemokraterna isagoo ku baaqay in la mideeyo familada. Waxa uu soo qaatay mudaharaadkii ay soomaalidu ka dhigeen irada hore ee baarlamaanka inta aysan bilaaban dooda. Waxa uu dalbaday in la badalo sharciga isagoo soo qaatay magacyada hooyooyin Soomaaliyeed oo caruurtooda maqantahay.
Ka dib waxaa la wareegay mikrofoonka Maria Ferm oo ka tirsan xisbiga Deegaanka iyadoo ka
hadashay baasaboor la’aanta Soomaalida iyo in DNA wax lagu cadeyn karo. Waxay sheegtay in dowlada ay kala shaqeynayaan xal u helida arintaas.
Ka dib waxaa halkaas ka hadlay Christina Höj Larsen oo ka tirsan xisbiga Vänsterpartiet iyadoo si qiiro leh uga hadashay arimaha Soomaalida oo tusaale u soo qaadatay hooyo lagu magacaabo Faduma oo degan Falköping. Christina ayaa cambaareysay aamusnaanta laga aamusanyahay arintaan. Waxay sheegtay in caruurta laga ganacsado ay siyaadineyso marka waalidiinta loo diido caruurtooda. Waxay sheegtay in heshiiskii dhexmaray dowlada iyo xisbiga Deegaanka uu yahay qalad qalad ku sax.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Fredrick Federley oo ka tirsan xisbiga Centerpartiet isagoo sidoo kale hadlay mideynta reeraha iyo in uu la kulmay Soomaali dhibaato ka haysato arintaan.
Sidoo kale waxaa ka hadashay goobta Emma Henriksson oo ka tirsan xisbiga KristDemokraterna iyadoo ka hadashay shuruuda aqoonsiga.
Waxaa goobta ka dhacay doodo dhexmaray xubin ka tirsan xisbiga cunsuriga ah ee SD iyo mudanayaasha aan kor ku soo xusnay. Si kastaba ha ahaatee arinta Soomaalida ayaa la dhihi karaa in ay maanta ahayd ajandaha ugu weyn ee dooda ku saabsan arimaha Socdaalka iyo Soo galootiga.
Dib ayaan ka soo qori doonaa wixii go,aano ah ee laga gaaray baarlamaanka iyo faahfaahintooda.
May 4, 2011 at 18:53
MAASHALLAAH ILAAHEY WAX KHEYR QABO HAKA DHIGO… JIMCAALE BRO AAD BAAD UGU MAHADSANTAHAY SIDA AAD WARKA NOOGU SOO GUDBINEYSID..
Asc dhamaan dadka kuxiran webka somaliska sln kadib jimcaale runtii ila iyo hada go.anka kaso baxay barlamanka sweden ma.aadan no sheegin wali miyadan halin wixi kaso baxay fadhigii barlamanka sweden ey yeeshen misa shekada xiiso umalahan somalida o sidaas ayaad dib ugu dhige plz hadi warbixinta aad heyso ha.aqristeen dadka cawa o idil sugayay asc
mahadsanid bahda somaliska .com garahan jimcale iyo saxibadiba marka walaal jimcale ma waxad ledahay go aankii wan sowada wili miyaa jawab mahadsanid
asc walalo wax aan idin ka rajay nayaa in aad noo soo qortaan waxii qo aan maanta laqaadhay waxii uqu mahiim sanaa waan warwar rayaa ee aad ban u mahad santi hiin by
Asc marka hore ilahen ba mahadleh inaga dhigy dad muslin ah wana inan umahad celina markasta tankale arintan ad ayan ugu farxay somaliska marki an si tos ah uga dhagaysanayey ino joga uganda o an orankaro waxay ku jirta magaloyin ugu badan e lagala socdo arimaha somalida waxan mahad ucelinaya bahda somaliska jimcale iyo sicid iyo inta lashaqaysa runti 2dan wil e an xusay wa wadaniyin wana u habalyeynaa hanaga dalina wana mahadsantihin khyr alaha idinku badalo wana idinku talinaya inad xirir lasamaysan idacadaha wa wayn sida bbc da voa universaltv Hc somali chen wad mahadsamtihin
Jibriil xasan says:
Asc salan kadib dhaman asxabta sugeysa natijada oo an kamid ahay jimcale waxan lenahay sxb wali dadku waxey isweydinaya maxa natijo ah oo kasobaxay? taas warbixin nagasi mahadsanid
Waxaan salaamaya dhaman bahda Somaliska , salaantaas sharafta leh ka bacdi , Waxaan filayaa Xaalku waa weli YAcnii FANOOLE FARO KAMA QODNA , waxaan ula jeedaaa Wax is bedel ah mahaayo Waa JUG JUG meeshaada joog , Go’aan soosocdaana ma jirto Dadka Waxaa la raba bil ba bisha kale in aay u dhiibto sidii loo sugaayo shirkii maanta waxaa lasoo baxay in la dhaho waxaa lasoo shegayaa bisha lixaad oo sidaaas laynagu wado marka SOMALIDA waxaan odhan lahaa an ka midka ahay SWEDEN WA XUMAATAY GO”AAN BAAYNA GADHEEEN KA DHAN AH cunsiriyad in dadka dadkoooda loo keenin Eee somaliyey TAshada oo iska sabura
xaqiiqdii jimcaaloow ilaa hada war farxad leh ma aadan soo gudbin ee isku day inaad soo galiso go,aankii si aan hal mar u wada dabaal dagnon mise arinta ayaad xoogaa xiiso u yeelaysaa si ay dad badan u soo wada booqdaan wabia kk mahadsanid walaal shaqo wacan
jimcale go.aanki la gaaray soo gudbi ee sheekada kale laga daa . hadey dowlada sweden cidna ee geeyneynin somalia ayaan ku celi lahaa caruurteyda m grty
May 4, 2011 at 19:52
Asc jimcale waxa iga su.al ah maxad jwb usiin la.dahay dadka ka codsanaya inad warbinti ugu dambeysay uso gudbiso misa sida lashegayo aya ka dhab ah o in badan in la boqdo ayad rabta webkaga taas waxa loo arkikara inad dadka ushaqeyn e madama dalabadkoda aad tixgalinweyso waxana suuragal ah in dadka aqbaarta ey meelo kale kahelan sidaana macaamiishada kuyarato adigana fooro sidaas kubaxdo e inta xiisaha jiro dadka qanci asc
Waan soo qoray warbixinta go’aanka ku saabsan. Ma dooneyn in aan idin soo bandhigo warar aanan xaqiijin marka hada waan xaqiijiyay ee aqrista.
cabdulaahi makaraan says:
May 4, 2011 at 20:01
waxaad moodaa in ay maanata dowlada iyo xisbiyada kalama wax uun iska saareen xill dhibaatada aadka u foosha xun ee ku haysata umada soo liyeed dalkan swedan.
taas oo la oaranka waa wax si dhab ah uga baxsan xuquuqda aadama amaba xeerka u yaala qaxoo tinimada in lakala laysku diido wiil iyo waalidkii dhalay laguna qanciyo waalidkii in uu jooga xalkan ilmihiina ku jiro dhibta kataagan dalkeeenii hooyo taas oo ah wax aad looga murugoodo dhab ahaan.
si kastaba ha ahaatee waxaan shaki ku jirin in umada soomaaliyeed ku nool dalkan ay muu jiyeen maanta wax la taaban karo oo aan hare loo arag, kadib markii ay u banaan baxeen sidan layaabka leh maanta.
waxaan halkaan uga mahadnaqayaa dhamaan intii kasoo qayb gshay iyo intii qabanqaabisay illahayna haka siiyo qayr iyo xasanaad aan la soo koobi karin. waan salaamayaa bahda somaliska.com
May 4, 2011 at 20:15
waad mahadsan tihiin, waxaana idinka sugaynaa in aad noo soo gudbisaan Go’aana uu Barlamanku gaaro insha allaah sidii aan idinka baranay.
ani suaal baan ku waydiin lahaa kayara baxsan arinkan laakiin uu madow badani igaga jiro hadaad ígu dhaanto
waxa waaye qofka marka laga yimaad xaaskiisa ka waran rajo intee leeg ayey leeyihiin dadka inuu naawilaya in loo iyagana loo keeno waalahood iyo waalidkood?
May 5, 2011 at 12:40
Waxaan Alle ka baryaa in uu hoosheena noo ga soo fudeediyo wadan kaan aanu daganahay oo familiga aay midoowaan insha alaah taas ayaan alle ka baryaa markasto waayo maanta dhibka jira alle ayaa og
Yahye Abdi Haji says:
Aad Ayaan Ugu Hanbalyaynayaa Dhamaan Xubnaha Shabakada Somaliska.com, Waxaan Jeclahay Inyar Inaan Fikjirkayga Ku Cabbiro Arrinta Taagan .
Runtii Somali Hadaynu Nahay Anigu Waxaan U Arkaa Dowladda Sweden Waxba Inooma Ogolo , Siyaasaddeeda Xiliganna Maaha Inay Dadka Kala Maqan Soo Qaado Sow Maynaan Garan Marka Yaan La Daalin .
Dowladda Swedena Waxaan U sheegayaa AQnigu waxaan ka mid ah dadka dadkoodii ka maqan yihiin Africa Ayaanna Jooga Anigo Ka Soo Cararay Dagaalada Sokeeye ee somalia ka socda mana doonayo inan ku laabto Marka Sweden Yaysan Na Lugoyn Ee Xaqiiqada Hasoo Gudbiso
sayid farah says:
Asalaalmu calaykum waraxma tulaahi wabarkaatuhu. dhamaan bahda sida tooska ah ugu xidhan website kan,iyo howl wadeenadiisa, mr. jimcaale iyo asxaabtiisa, anigoo kamid dadka kusugan wadankii hooho, sugayana wax go’aan ah in laga soo saaro xayiraada soomaalida, waxa aan ladhacsanahay sida quwada iyo baadxada leh ee soomaalida sweden kudhaqani ay ugu banaan baxeen arintaas aan kor kuso xusay, runtii waad mahad santihiin ilaahayna dadaalka aad noogu jirtaan ha idinla qabto, insha allaahu maalin maal maha kamid ah ayaa go’aan ina anfaca la soo saaridoona, dadaalka siiwada oo haka daalina, waxa aan hambalyo guud ahaan udirayaa dhamaan cidkasta oo kaqayb qaadanaysa arimahaas soomaalida,